Thenga ama-5 / 15Pcs Amathuluzi Wokwenza Ibhulashi Setha - Ukuhanjiswa Kwamahhala Futhi Ayikho Intela | WoopShop®
I-5 / 15Pcs Ithuluzi Lokusetha Ithuluzi Lokusetha
Umbala we-Handle 15pcs omnyama Ama-15pc amhlophe 15pcs igolide 15pcs pink 5pcs omnyama Ama-5pc amhlophe 5pcs igolide 5pcs pink 5pcs rose 5psc ophuzi 15pcs rose 15psc ophuzi Amehlo ama-5pcs amnyama Amehlo ama-5pcs amhlophe I-5pcs yegolide yeso I-5pcs yamehlo abomvana Amehlo ama-5pcs avukile Iso le-5psc eliphuzi 10pcs igolide Ama-10pc amhlophe 10pcs omnyama umkhakha ongu-10pcs ophuzi umkhakha 10pcs rose umkhakha 10pcs pink umkhakha we-10pcs wegolide umkhakha ongu-10pcs umhlophe umkhakha 10pcs omnyama 10pcs rose 10pcs pink
15pcs omnyama Ama-15pc amhlophe 15pcs igolide 15pcs pink 5pcs omnyama Ama-5pc amhlophe 5pcs igolide 5pcs pink 5pcs rose 5psc ophuzi 15pcs rose 15psc ophuzi Amehlo ama-5pcs amnyama Amehlo ama-5pcs amhlophe I-5pcs yegolide yeso I-5pcs yamehlo abomvana Amehlo ama-5pcs avukile Iso le-5psc eliphuzi 10pcs igolide Ama-10pc amhlophe 10pcs omnyama umkhakha ongu-10pcs ophuzi umkhakha 10pcs rose umkhakha 10pcs pink umkhakha we-10pcs wegolide umkhakha ongu-10pcs umhlophe umkhakha 10pcs omnyama 10pcs rose 10pcs pink
5 / 15Pcs Ithuluzi Lokubhulasha Ithuluzi Setha - 15pcs emnyama ihlehlisiwe futhi izothunyelwa ngokushesha nje lapho isibuyile esitokweni.
Inombolo imodeli: FHZS-152
Kusetshenziswe Nge: Sets & Kits
Uhlobo lwento: Makeup Brush
Izinto: Inayiloni izinwele + i-aluminium alloy + plastic
Ubuningi: 5/15 PC
Umbala: Mnyama / Mhlophe / Rose / Igolide / Pinki / Ophuzi
Usayizi wamabhulashi: Cishe u-13-15cm / 5.12-5.9in
Ingqikithi yesisindo: Cishe ngama-30/45 / 90g
Lesi sethi sifaka amabhulashi ahlukile we-3 ukusiza ukudala ukubukeka okuhlukahlukene.
Ukuma nobukhulu obuhlukahlukene bristles kukuvumela ukuthi udale ukubukeka okuhlukahlukene ngenkathi unikeza izitayela zokwenza izimonyo ezipholishwe ngokuphelele.
Ibhulashi ngalinye lenziwe ngobunono ngokuqala ngesibambo sokhuni ne-aluminium alloy ferrule.
Qeda ikesi lokuthwala elinezitolo zokuvalwa kwamagnetic-stud futhi uvikele amabhulashi kalula.
Indlela ehleleke kakhulu nenhle yokuphatha ukwakheka nezimonyo zakho.
Iyagezwa ngeNo Dye Run.
Kwenzelwe abathandi bezimonyo, amathuba wokudala awapheli.
1 * Isethi yamabhulashi ama-5 / 15pcs
Kwafika ngemuva kwezinyanga ezimbili, kubonakala kulungile, kuncane kunokulindelekile Kubukeka njengesithombe
Isethi enhle! Inani elikhulu lamabhulashi, ngentengo enjalo limnandi nje !! Ikhwalithi ilungile, yanelisekile, ngiyabonga! :)
Lezi zimpahla zifike ehhovisi, njengoba kukhonjisiwe ekulandeleni umkhondo, kodwa ukuthi yiliphi ihhovisi elingaziwa, akekho ofonile noma obikile. Wahlala lapho izinsuku ezingama-20.
Ngiyabonga ngathola amabhulashi